စိုင်းစိုင်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: October 2009
Posted by Sai Sai at 8:54 PM0comments
Please try to fill Yes or No below the blank.
______ , I am notahuman.
Gook luck :-)
Posted by Sai Sai at 8:05 PM0comments
Posted by Sai Sai at 7:50 PM0comments
Posted by Sai Sai at 6:34 PM0comments
Posted by Sai Sai at 12:39 PM0comments
အချစ်ရာသီ အချိန်သမယ အခါ၀ယ်
ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာ ဖြစ်
လွမ်းဆွတ် တမ်းတ ချစ်ရံှုးနိမ့်ကာ
စိတ်တွေကို ပန်ကာလေ ခံရင်း
ဟိုဒီပျံလွှား လေလွှင့် အထီးကျန်ဆန်လွန်းသည့်
ဤလောကမှာ ပြားရည်ဆမ်းသည့် အချိုမြိန်ဆုံးသောအရာ တစ်ခု ဖြစ်နေပါလားဆိုတာ ကျနော်သိခဲ့ပါပြီ။
ရင်ထဲမှာ မီးရထားကြီး ခုတ်မောင်းသွားသလို တ.ဒုန်း.ဒုန်း. တ.ဒိုင်း.ဒိုင်း တုန်ပြီး...
အချစ် မျက်နှာတော်ဦးကို မော်ဖူးရတဲ့ အချိန်တွေမှာ...
ကျနော်အဖို့ ဆားမစိမ်ခဲ့တဲ့ ကြောင်လျှာသီးကို စားလိုက်တဲ့ အရသာလို ပါလားကွယ်...
ဪ..စိတ်တည်ငြိမ်သက်ရာ၊ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပ အရပ်များဆီသို့ ပြေးထွက်လိုက်ချင် ပါဘိဗျာ.....
Posted by Sai Sai at 9:38 PM 1 comments
Labels: feeling, Love, Poem
On Friday night I met some friends who I haven't seen foracouple of months. We could talkalot of things. The interesting thing that we talked about was using Shan Unicode 5.1. Regarding on our discussion, we surely gather our Shan people who are using Shan Unicode and discuss about it very soon.
Posted by Sai Sai at 8:55 PM0comments
Do you know why male model are not okay with car ads?
လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က ပါတီပဲွတခုမှာ ယိမ်းနဲွ့ပြီး ကတဲ့ မင်းရဲ့ဟန်အမူအရာလေးတွေ...
မွေးနေ့ပဲွ တခုမှာ ကိတ်မုန့် Cream ကိုယူပြီး မင်းလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ငါ့ပါးပြင်ကို ပွတ်သပ်ခဲ့တာ လေးတွေ
ဓါတ်ပုံရိုက်တိုင်း ဟန်ပန် အမျိုးမျိုး (Acting) နဲ့ ကင်မရာ မှန်ဘီလူးကို ဆူးရှတဲ့အကြည့် တွေနဲ့ ကြည့်တဲ့ မင်းမျက်ဝန်းအစုံလေးတွေ.....
ဖုန်းထဲမှာ အဟင့်..ဟင့်... နဲ့ ငိုရှိုက်တဲ့မင်းရဲ့ ငိုသံတွေလေးတွေဟာ "တည့်တည့်ဘဲပြောမယ်ဆို သိလား" ဆိုတဲ့ (မင်းအကိုလို့သတ်မှတ်တဲ့) အကို့ နှလုံးသားထဲမှာ မေ့အရနိုင်လောက်အောင် ညှိတွယ်စဲွကပ် နေပြီလားကွယ်။
Posted by Sai Sai at 5:50 PM7comments
Posted by Sai Sai at 9:35 PM2comments
Posted by Sai Sai at 9:16 PM4comments
Posted by Sai Sai at 7:58 PM 1 comments